व्यावसायिक भैँसीपालनबाट मासिक रु ५० हजार भन्दा बढी आम्दानी ! « News24 : Premium News Channel
व्यावसायिक भैँसीपालनबाट मासिक रु ५० हजार भन्दा बढी आम्दानी !
तुलसीपुर १९ सक्रामका रोकाले विदेशबाट फर्केपछि शुरु गरेको व्यवसायिक भैँसीपालनबाट विदेशमा भन्दा चारगुणा बढी आम्दानी गर्दै आएका छन् । “विदेश हुँदा मासिक दशहजार कमाइ हुन्थ्यो”, उनले भने, “तर अहिले आफै व्यावसायिक भैँसीपालन गरेर मासिक रु ५० हजार हाराहारी आम्दानी गर्छु ।”
मलेसिया पाँच वर्ष बसेर फर्केपछि दुई भैँसीबाट व्यवसाय शुरु गरेका रोकाले अहिले २० भैँसी पालेका छन् । शुभलक्ष्मी पशुपालन फर्ममा मुर्रा क्रस र एउटा होलस्टेन गाई छ जसमध्ये गाई र चार भैँसीले दूध दिन्छन् । एउटा भैसीले कम्तिमा पाँच लिटर दूध दिन्छ ।
उक्त दूध डेरीमा बेच्ने गर्नुभएको छ । दश लाख लगानीमा २०७१ साल देखि उहाँको व्यावसायिक भैँसीपालन शुरु भएको हो । थप १० भैसी थप्ने लक्ष्य छ । व्यवसाय सञ्चालन गर्न उहाँले वाणिज्य बैंकबाट दश लाख ऋण दिएका छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट ४० लिटरको दूध बोक्ने क्यान, ढुवानी सेवालगायत करीब दुई लाख ५० हजार सहयोग प्राप्त गर्नु भएको छ । भैँसीलाई दाना र घाँस खुवाउने गरिएको छ । भैँसीबाट उत्पादन भएको गोबरबाट रोकाले गोबर ग्यास निकाल्ने तयारी गरेका छन् ।
भैँसीको गोबर भने स्थानीय किसानलाई बिक्री गर्दै आएको रोकाले बताए । “आफूले व्यवसाय सञ्चालन गरे आफू अनुकूल चल्न सकिन्छ, तर अर्काको देशमा काम गर्न गए बिरामी भए पनि काममा खटिनुपर्छ”, उनको भनाइ थियो ।
घरमै भैँसी पालेर दैनिक दूध, दही खान पाइने र आम्दानी पनि राम्रो हुने भन्दै यो पेशाबाट सन्तुष्ट भएको उहाँले बताए । उनका अनुसार गाईको एकलाख र अन्य भैसीको २५ हजारदेखि माथिको बीमा गरिएको छ ।